Ancelotti oo helay war naxdin gelinaya – GEELLE MAG
Ancelotti oo helay war naxdin gelinaya
Cali Axmed Posted On September 12, 2019
Wararka ka imaanaya gudaha dalka talyaaniga ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen war naxdin leh oo aan la fileynin, kaasoo u soo yeeray macalinka kooxda Napoli ee Carlo Ancelotti, kahor kulanka ay la ciyaari doonaan Liverpool.
Kooxda reer Talyaani ee Napoli ayaa waxay kula ciyaari doontaa naadiga difaacanaya koobka Champions League kulanka furitaanka wareega group-yada ee Group E, Talaadada soo aadan.
Haddaba shabakada “Football Italia” ee dalka Talyaaniga ayaa waxay shaaca ka qaaday in xiddiga kooxda Napoli ee Lorenzo Insigne uu si kali ah u qaatay tababarka, taasoo la micno ah in uu shaki ku jiro ka qeyb galkiisa kulanka adag oo ay la ciyaarayaan kooxda daafacaneyso koobkan Champions League-ga ee Liverpool.
Sheekada intaas oo kaliya kuma koobna, ee tababare Ancelotti ayaa sidoo kale wuxuu halis ugu jiraa in uu waayo xiddig kale, kaasoo ah ninka reer Poland ee Milik oo la shaki galinayo ka qeyb galkiisa kulanka ay Liverpool kula ciyaari doonaan Champions League-ga.
Milik ayaa garoomada ka maqnaa muddo bil ah, haddana waxaa dib u dhac ku yimid soo laabashadiisa, sida laga soo xigtay shabakadaha Sky Sport Italia, iyo Sportmediaset, waxaana la filayaa in uu ku soo laabto tababarka Isniinta soo socota.